အလိုအလျောက်ဆန်စက်စက်ကိရိယာအပြည့်အဝ / ဆန်စက်စက်
ဒီစီးရီးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်အညီအဆင့်မြင့်သောကုန်ကြမ်းများမှဒီဇိုင်းဆွဲ။ ထုတ်လုပ်သည်. ဒီစပါးဆန်စက်စက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောစပါးဆန်စက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်, အနိမ့်ပြေးကုန်ကျစရိတ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်း, သက်တမ်းပိုရှည်ပြီးတိုးမြှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
စပါးကြိတ်စက်သည်ပွတ်ဆန်ထုတ်လုပ်ရန်စပါးအစေ့မှကိုယ်ထည်နှင့်ဖွဲများကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်. တစ် ဦး ၏ရည်ရွယ်ချက် ဆန်ကြိတ်ခွဲစနစ် ဆန်ဖြူလုံးလုံးကိုထုတ်လုပ်ရန်အခွံနှင့်ဖွဲနုအလွှာများကိုဖယ်ရှားရန်မှာအညစ်အကြေးများကင်းစင်ပြီးအနိမ့်ကျိုးသောအဆန်အရေအတွက်ပါဝင်သည်။.
1. ဤစပါးအလိုဆန်စက်စက်ရုံတွင်လည်ပတ်စက်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်, လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုပိုမိုအဆင်ပြေသည်.
2. ဤစပါးဆန်စက်သည်အစာကျွေးသောအခါဖုန်မှုန့်ပြproblemနာကိုလျှော့ချနိုင်သည်, လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တိုးတက်စေရန်ပိုမိုအဆင်သင့်ဖြစ်သည်.
3. ဆန်စက်စက်တွင်သဲ roller ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်ရှိသည်, မီတာပါးစပ်စေရန်လိုအပ်သောတိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏, ရှေ့ဆက်အတန်းစဉ်အတွင်းသီးနှံဖွဲ, ဆန်အပူချိန်နိမ့်, ဆန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်,ဆန်စက်စက်ရုံသည်သန့်စင်ပြီးဖြစ်သောဖွဲနုအမှုန့်ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်.
800~ 1000(ကီလိုဂရမ် / နာရီ)
1 ဆန် destone ထားကြ၏,1 ဆန်တွင်းထားပါ,1 ဘောဇဉ်ခွဲခြာစက်ထားကြ၏ ,1 ဆန်စက်စက် ,1 တနျးစက်ကို set,1 တစ်ခုတည်းဓာတ်လှေကားထား ,1 နှစ်ဆဓာတ်လှေကားထားကြ၏